अघिल्लो पोस्ट: सुझावहरू - मलेशिया - बाटू गुफाहरू
अर्को पोस्ट: सिंगापुर र dollar०० डलर गम पछाडि रहस्य
पोष्ट गरिएको 1 डिसेम्बर 2018 द्वारा रोमोमो लुकाना
कुआलालम्पुरमा जाँदैछ र पेट्रोनास टावर्समा जान नपर्ने रियो डे जनेरियो जाने र क्रिस्टो रेन्डेन्टरमा जाने वा पेरिस जान नगर्ने र एफिल टवरमा जाने गर्दछन्। त्यसैले म मलेशियाबाट यस पोष्टकार्डको बारेमा एकदम बढी भन्नेछु।
त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने
पेट्रोनास टावर्समा जाने सबैभन्दा सजिलो तरीका मेट्रो हो। केएलसीसी स्टेशनमा पुग्न सम्भव छ जुन दुई टावरहरूको एक पाटोमा छ। (र मेट्रो मा मलय र अंग्रेजी मा बोल्छ, साथै साथ स्टेशन को चिन्ह देखाउने छ।) त्यसैले यो मा पुग्न सजिलो छ। अर्को तरिका मा बस या टैक्सी (या उबर) द्वारा प्राप्त गर्न को लागी छ।
मैले बनाएको सिफारिश प्रारम्भिक टिकट किन्न चाहन्छु। आफ्नै वेबसाइटमा पेट्रोस टावर्स यहाँ। र कारण सरल छ, त्यहाँ बिक्रीको लागि टिकटहरूको सीमा हो र यदि तपाईं समयमा किन्न छोड्नु हुन्छ भने त्यो दिन थप उपलब्ध नहुन सक्छ, वा केवल अर्को पटक मात्र उपलब्ध छ। त्यसैले यदि तपाईंले शुरुवात टिकट खरीद गर्नुहुन्छ यो योजनालाई सजिलो बनाउँछ।
टिकटको जमीन देखि 170 मीटर छ जो Skybridge पहुँच दिन्छ। (भवन को आधा भन्दा पनि कम आकार। दृष्टिकोणले त्यहाँ पहिले नै एकदम प्रभावशाली छ। यो 86m बारेमा कारण Futuristic डिजाइन गर्न सबैतिर ग्लास धेरै तापनि बन्द। यस पछि तपाईं 450 तल्ला मा प्राप्त गर्न एलिभेटर फर्कनुहोस्। छ गर्न यसलाई निर्माण र केही वर्ष थियो 451,9 तल्ला मा जमीन, वा सही 86 मीटर। यो सबै शुद्धता निर्माण को लागि दिइएको छ पहिले नै दुनिया मा सबै भन्दा ठूलो भएको छ। आज पनि सबै भन्दा ठूलो 10 बीचमा छैन। उच्च कि सम्झना संसारमा हाल 828 मीटर संग बुर्ज खलिफा (लगभग डबल) छ।
तर हामी कुन कुराबारे कुरा गर्छौं। आठौं छैटौं फ्लोरको दृश्य। (तल्ला 86) एकदम प्रभावकारी छ! तपाईं सारा शहर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सूर्यास्त पकड्नु हुन्छ भने तपाइँसँग एकदम राम्रो दृश्य हुनेछ। र यदि यो रात्रि हो भने तपाईं चाँहि अझ नजिकको कुरा देख्न सक्नुहुनेछ। रातको शहर यसको आकर्षण छ, तर इमारतको रोशनीहरूले यसलाई दृश्य खारेज गर्छन्। जिज्ञासाको कुराको रूपमा, म भन्छु पेट्रोनास मलेसियाको पेट्रोब्रास जस्तो छ। हो, त्यो एक तेल कम्पनी हो। इमारतको आकार एक ठूलो एम हो जसले मलेशियाको लागि खडा गर्छ। Skybridge (मध्य पुल) ले पुल को प्रतीक गर्दछ कि देश को भविष्य संग अतीत को जोड्छ, वास्तव मा डिज़ाइन स्थिर छ। र यो दुनिया मा मलेशिया को महत्व र गर्व को प्रदर्शन को लागि एक विशाल हो।
र अरू के?
पछाडि र लिफ्ट बाहिर निस्कन एक खरीदारी मल छ, एक Petronas लेगो, कुञ्जी किङ्गहरू, स्मृति चिन्ह, आदि।
जुत्ता टावरको अगाडि त्यहाँ एक चौडाई हो जुन 20 वरिपरी नि: शुल्क पानी देखाइएको छ: यसैले 00h, यो दिनको चढाईको मूल्य हो र रातको वरिपरि घुम्न जान्छ। चक्र र पानी शो हिड्ने क्षतिपूर्ति।
स्पष्ट सुझाव, तर याद गर्न महत्त्वपूर्ण। यदि तपाईं हाइट्सबाट डराउँछन् भने, यो स्थानमा पुग्न र चढ्न सक्दैन, तर पृष्ठभूमिमा बगैचा वर्ग र पेट्रोनास टावरहरू हेर्नुहोस्।
यसबाहेक, त्यहाँ एक्वारिया KLCC (एउटी स्टेसन) छ कि त्यहाँ जाने लायक छ, पेट्रोनास टावरबाट केहि मीटरमा अवस्थित छ र कम्पनीको पर्यावरण शिक्षा र समुद्री जीवनमा ध्यान केन्द्रित गरी विशेष गरी एक तेलको कुकुर नजिकैको एक भाग हो। यसले क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य प्रजातिहरू पनि समावेश गर्दछ। यो जस्तै कि यो व्यक्तिलाई पर्यावरण जागरूकतामा जगेडा गर्ने थियो। क्यान्सरमा यो सानो उल्टो (फोटोको) त्यहाँ तपाईंको भ्रमणको लागि पर्खिरहेको छ। विस्तार, यो बर्फ को एक उल्लू हो कि एक प्रजाति हो जुन टन्ड्रास बसेको छ, यो धुलो सम्म एक फ्लिप द्वारा कवर छ।
म अर्को पोस्ट सम्म यहाँ रहनेछु।
थप पोष्टहरूका लागि तलको विश्व नक्शामा क्लिक गर्नुहोस्।
कसरी भविष्य मालासिया विगत Petronas पेट्रोनास ट्विन टावरहरू